Bogga ugu weyn » Wararka Safarka » Hawlwadeenada socdaalka ayaa beeniyay argagaxa inuu hurinayo heshiisyada qiimaha dhimista
Hawlwadeenada socdaalka ayaa beeniyay argagaxa inuu hurinayo heshiisyada qiimaha dhimista
(TVLW) - Dadka reer Scotland ee ay macaluushay waxaa ku mashquulsan fasaxyo jiilaal daqiiqadii ugu dambeysay oo jaban laakiin kuwa ka shaqeeya safarka ayaa dafiraya inay isku dayayaan inay shilimaadka ugu dambeeya ka ceshadaan macaamiisha kalsoonidooda ay saameysay culeyska deynta.
Iibinta iibka waxaa hogaaminaya TUI Travel, oo ay sameysay Anglo-German midowga koowaad ee kala doorashada milkiilayaasha Thomson Travel, taas oo bixinaysa heshiisyo kuwa diyaarka u ah inay ka duulaan gagida diyaaradaha Glasgow inta lagu jiro Kirismaska.
Rival Thomas Cook iyo hawlwadeenada kale ee dalxiisyadu waxay leeyihiin waxyaalo isku mid ah inkasta oo afhayeen u hadlay Ururka Wakiiladda Socdaalka ee Ingiriisku uu si dhakhso leh u beeniyay in heshiisyadu ay nabaro-jab ku noqdeen xilligii adkeynta suunka guud.
"Waxa jiri kara meelo kooban oo niyad jab leh, laakiin warshadaha dalxiiska ayaa ka qaab fiican sidii in muddo ah," ayuu yiri. Daraasaddeena gaarka ah waxay muujineysaa in jiilaalka jiilaalka uu marayo 10% sanadkii la soo dhaafay waana sheeko la mid ah buugaag horay loo helay xagaagan.
"Waqtigan xaadirka ah waxaan saadaalineynaa in wadarta iibka fasaxa ee Boqortooyada Midowday aan wax laga badali doonin 19 milyan sanadkaan, inkasta oo aan sifiican dib ugula noqon karno tiradaas mustaqbalka."
Qaar kale waxay ku adkaysanayaan in dalabkii dhawaa ee aadka u sareeyay uu aad u wanaagsan yahay in la sii joogo iyo in ay jiri karaan gorgortan dheeraad ah oo la bixiyo xagaaga marka ay safarada safarku ku dhibtoon karaan, oo ay la socdaan aagagga kale ee macaamiisha, taas oo ay ugu wacan tahay sii socoshada amaahda oo sii socota.
Caddaynta ugu horreysa ee dhabta ah ee suuqa ayaa ku beegan Talaadada marka TUI ay tahay inay keento tirooyinkeeda sanadlaha ah ee pro-forma kadib isku biiritaanka.
Falanqeeyayaashu waxay filayaan in macaashka canshuurta kahor la isku daro sanadkiiba si loo muujiyo qashin from 318m ilaa kudhowaad £ 255m inta badan sababo la xiriira isdhexgalka ka dib ku biirista, laakiin waxay saadaalinayaan in madaxa fulinta Peter Long uu xaqiijin doono koror laba-god ah dalabkii ugu dambeeyay inkastoo go'aanka lagu yareynayo awoodda qiyaastii 12%.
Tirooyinka ayaa la filayaa inay muujiyaan jaale wanaagsan gaar ahaan fasaxyada raaxada ee meelaha Bariga Fog iyo duullimaadyada kuraasta keliya iyadoo kooxdu ay sii yaraynayso ku tiirsanaanta Isbaanishka iyo meelaha kale ee suuqyada laga iibsado.
Falanqeeyayaasha ka tirsan Investec ayaa rumeysan in tani ay bixin karto baaxad si caqligal ah loo fahmi karo iyo in agaasimayaashu ay ururin doonaan savings 150m oo ah keydka midowga halkii laga saadaalin lahaa m 100m, taasoo ka caawinaysa macaashka inay kor ugu kacdo in ka badan m 321m sanadkaan socda. Waxa kale oo jira warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in kooxdani ay badbaadin karto lacag ka badan intii ay ku midoobi lahayd hawlaheeda diyaaradaha Jarmalka iyo kuwa shirkadda Germanwings ee qiimaha jaban.
In kasta oo saadaashu dhiirrigelisay, TUI waxay niyad jab weyn ku noqotay maalgashadayaasha, iyadoo saamiyada ay hoos uga dhaceen qiimaha sabeynta ee 302p illaa heerarka la soo bandhigayo ee ku dhow 270p tan iyo markii ay samaysay suuqii ugu horreeyay ee suuqyada bishii Sebtember.
"TUI iyo Thomas Cook waxaa laga yaabaa inay leeyihiin ku dhowaad 85% suuqa dhaqameed ee xirmooyinka xirmooyinka u dhexeeya laakiin waxay u baahan yihiin inay sameeyaan wax ka badan dhimista awoodda si ay ula qabsadaan isbeddelada suuqa," ayuu yiri mid ka mid ah kormeerayaasha.
“Waxaa sii kordheysa, dadku waxay ballansadaan hoteelladooda iyo duulimaadyadooda iyagoo adeegsanaya hawlwadeeno internet oo kala duwan halka iibsashada guryaha fasaxa ah ee dibadda ay malaayiin qof ka saareyso isla'egta. Ugu yaraan 500,000 oo qof ayaa hadda guryo ku leh Spain, qaar badan oo ka mid ahna waxay u oggolaadaan inay boosaskooda u oggolaadaan asxaabtooda iyo qoysaskooda iyo sidoo kale kuwa ku siiya fasax ganacsi.
“Hawl wadeenada waaweyni waxaa laga yaabaa inay ku hungoobaan xadadka 2% ama 3% fasaxyadooda jaban ee Yurub laakiin way ku adkaan doontaa inay ku qasbaan sicirka kororka cimilada haatan jirta.
Meelaha dhaadheer ee loo raaco ayaa ah soojeedin soo jiidasho leh, laakiin waa tigidh weyn oo dad badani soo jeedinayaan, waxaana dhici karta inay ku dhacdo khalad kasta oo dheeri ah oo macaamiisha ku sii adkeynaya inta sannadku sii socdo. ”